यसरी भाइरल भयो, घोराहीको रुखहरु बीचको रेष्टुरेण्ट « Farakkon
दाङ, बैशाख १२ । घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १३ डुमरगाउँस्थित एउटा रेष्टुरेण्ट आजकल सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छ । टिकका रुखहरु बीचको ‘ट्रि रेष्टुरेण्ट एण्ड प्यालेस’ टिकटक प्रयोगकर्ताकै कारण एकाएक भाइरल भएको हो ।
सामाजिक सञ्जालको प्रयोगकर्ता अधिकाँश किशोर किशोरी त्यहाँ पुग्ने गरेका छन् । उक्त रेष्टुरेण्ट घोराहीको बसपार्कदेखि झन्डै ५०० मिटर उत्तरमा अवस्थिछ छ । यो रेष्टुरेण्ट तीन जना गाउँ घरकै साथी भाइ मिलेर खोलेका हुन । उनीहरु तीनै जनाको पुर्खेउली घर रोल्पा त्रिवेणी गाउँपालिका हो ।
मण्डल घर्ती यो रेष्टुरेण्टका कल्पनाकार हुन । २३ बर्षीय मण्डल घर्ती,२२ बर्षीय अमर श्रेष्ठ र २४ बर्षीय हर्क बिकले मिलेर रेष्टुरेण्ट सञ्चालन गरेका हुन । घर्ती र श्रेष्ठ बच्चै देखिका मिल्ने साथी हुन । जस्ले प्लस टू सम्म संगै पढे । दुबैले रोल्पाको होलेरीबाट प्लसटुको पढाई पुरा गरे ।
यो बीचमा श्रेष्ठ घरको परिस्थितिले कामको खोजीमा इण्डिया जान बाध्य भए । कोरोनाको कहरपछि घर फर्किए ।
मण्डललाई भने देश छोडी बिदेशमा काम गर्न जान पटक्कै मनले मानेन । नेपालमै केही गरेर देखाउने उनको चाहा थियो । दाङ झरे पछि घोराहीको पद्मोदय माविबाट १८ महिने कम्प्यूटर इञ्जिनियरिङको कोर्ष गरे ।
तुलसीपुरमा साईबरमा काम गरे । त्यहाँ उनको मन धेरै दिन रमाउन सकेन । अनि घोराहीको नारायणपुरमा छापा खानामा काम गरे । त्यहाँपनि एक महिना भन्दा बढी बस्न सकेनन् । घर्ती घर फर्किए । घोराही १३ स्थित डुमरगाउँमा पनि उनको घर छ ।
काम छोडेपनि केही गरेर देखाउने हुटहुटी मनमा थियो । तर, के गर्ने ? उनी सोचिरहेका थिए । मण्डलको घर जाने बाटो छेउमै सुन्दर रुखहरुको एउटा बगैचा थियो । घर्ती यहाँ गएर त्यो बगैचा खुबै नियाल्थे । त्यही क्रममा उनले त्यही बगैचा भित्र नयाँ किसिमको रेष्टुरेण्ट खोल्ने सपना सजाए ।
सपना देखे जस्तै रेष्टुरेण्ट सञ्चालन गर्न लगानी चाहिन्थ्यो । उनी एक्लै त्यो सबै गर्न सक्दैन थिए । त्यो कुरा उनले आफ्नो बच्चैदेखिको मिल्ने साथी अमर श्रेष्ठ संग गरे । इण्डियाबाट घर फर्केका अमरले पनि अब आफ्नै ठाउँमा केही गर्नुपर्छ भन्ने सोच थियो । दुबैको कुरा मिल्यो । उनीहरु त्यो बगैचा हेर्न गए ।
जग्गा धनिलाई खोजे । बार्षिक ६२ हजारका दरले ५ बर्षका लागि भाडामा लिने सम्झौंता गरे ।जग्गा भाडामा त लिए,तर उनीहरु संग कुकको ज्ञान थिएन । अब के गर्ने त ? उनीहरुले गाउँकै हर्क विकलाई सम्झिए । जस्ले होलेरीमा होटेल सञ्चालन गर्दै आएका थिए । उनसंग इण्डियामा समेत यस्ता होटेलहरुमा कुकुको काम गरेको ज्ञान थियो ।
बिकलाई घर्ती र श्रेष्ठले आफ्नो योजना सुनाए । बिक पाटनर बन्न तयार भए । सबैले ठाउँ हेरे । रेष्टुरेण्ट निर्माणको कामले गति लियो । फागुन १४ गतेदेखि उनीहरुले रेष्टुरेण्ट सञ्चालन गरे ।
तीन जना साथी भाइ मिलेर खोलेको रेष्टुरेण्टमा हालसम्म लगानी २० लाख पुगिसकेको म्यानेजर समेत रहेका मण्डल घर्तीले बताए । हाल ट्रिज रेष्टुरेण्टमा ११ जना स्टाप छन् । तीन जना पाटनर मध्य घर्तीले म्यानेजरका रुपमा काम गर्छन । बिक र श्रेष्ठले किचेनमा कुकुको काम गर्छन । उनीहरु कसैलाई पनि एक छिनपनि फूर्सद हुँदैन ।
मण्डल हालसम्मको सफलताले उत्साहित छन् । अब डोकोहरु रंगाएर रुखमा टंगाउने योजना घर्तीले सुनाए । यो रेष्टुरेण्ट झन्डै १२ कठ्ठा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । सबै रुखका फेदहरु सेतो र रातो रंगले रंगाइएको छ । रुखहरु ध्वजा पताकाले सजाइएको छ । झन्डै ५५ को हाराहारीमा रंगिविरङ्गी छाताहरु रुखमा डोरीको साहेताले झुण्ड्याइएको छ । फोटो खिच्नका लागि ठाउँ निर्माण गरिएको छ । यहाँ आउनेहरुलाई रेष्टुरेण्टले फोटोपनि खिच्ने ब्यवस्था मिलाएको छ ।
तीनै रुखहरुका बीचमा बिभिन्न ठाउँमा ६ ठाउँमा कटेज निर्माण गरिएको छ । जहाँ ग्राहकहरुले खाजा नास्ता खाने गर्छन । बजारमा पाइने हरेक खाजाहरु त्यहाँ उपलब्ध रहेको रेष्टुरेण्ट सञ्चालकको दाबी छ ।
रेष्टुरेण्टमा आउने ग्राहकहरुको चाहानालाई ध्यानमा राखेर डिएसएल क्यामेराबाट फोटो खिच्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । टिकटकका लागि ५÷७ वटा फोटो खिचेको प्रतिव्यक्ति २० रुपैंया लिने गरिन्छ । एउटा टिकटक भिडियो खिचेको ५० रुपैंया लाग्छ । खिचेको फोटो वा भिडियो सम्बन्धित ब्यक्तिको मोवाईलमा राखि दिन्छन् । जहाँ कभर भिडियो र विइडिङ भिडियो खिचेको ५००० रुपैंया लिने गरिन्छ ।